Mashiinka Goynta Fiber Laser, Mashiinnada Calaamadeynta Laser - Qorraxda Laser
Mashiinka Mashiinka Goynta Fiber Feexan ee Buuxi
Qalabka mashiinka culus ee culus ， qaybaha mashiinka ugu muhiimsan waxay korsadaan sumadda sare ee la soo dejiyo; Naqshadeynta heerka Yurub CE; waxaa lagu qalabeyn karaa nidaam si buuxda otomaatig ah u raraya una dejinaya; Ugu badnaan awoodda leysarka illaa 20KW.
Xulista Iyo Qalabaynta Mashiinka Saxda Ah Ee Shaqadaada Si Ay kuu Caawiyaan
Mashiinka hal miis goynta leysarka fiber (ST-FC3015)
Birta xaashida iyo tuubooyinka mashiinka goynta leysarka fiber
Mashiinka goynta leysarka yar yar ee cabirka yar (ST-FC6060)
Gacanta qabtay mashiinka alxanka fiber laser
Mashiinka calaamadeynta leysarka fiber-ka ah ee la qaadan karo (ST-FL20PF)
Nooca golaha wasiirada mashiinka calaamadeynta leysarka fiber (ST-FL20B)
Nooca dabaqa mashiinka calaamadeynta leysarka fiber buuxa oo xiran
Suzhou Suntop Laser Technology Co., Ltd. Ku bilow shaqada iyo horumarinta tikniyoolajiyada leysarka laga bilaabo sanadka 2006. Waxaan nahay shirkad casri ah oo casri ah oo ku takhasusay R & D iyo soosaarida qalabka leysarka. Shirkadeenu waxay leedahay aqoon isweydaarsi heer sare ah oo loogu talagalay mashiinka goynta laser, mashiinka alxanka laser iyo mashiinka calaamadeynta laser gebi ahaanba qiyaastii 15,000 mitir murabac iyo 80 shaqaale, oo ay ku jiraan 8 injineero laser iyo injineero farsamo oo in ka badan 10 sano khibrad u leh warshadaha laser.
Julaay / 28/2020
Mashiinkayaga mashiinka goynta leysarka fiber-ka ah ee saxda ah ee saxda ah ayaa si guul leh loogu geeyay Jarmalka. Macaamiilku wuxuu badanaa siiyay adeegyo bir ah oo wuxuu ubaahanyahay sax 0.08mm. Bilowgii, wuxuu doortay alaab-qeybiyeyaal badan, ka dib markii uu isbarbar dhigay mishiinka qaabeynta, saxsanaanta, xirfadda iyo ...
Laga soo bilaabo cilmi baarista iyo horumarinta ilaa naqshadeynta ilaa wax soo saarka, kadib 40 maalmood oo dadaal ah dhammaan shaqaalaha SUNTOP, waxaan u habeynay quudinta si otomaatig ah oo toos ah iyo soo dejinta mashiinka jarjarada laser-ka fiber fiber-ka ayaa si guul leh loogu rakibay Faransiiska. Xawaaraha socda ee rarka iyo dejinta waa mid aad u dhakhso badan, oo ah 2 jeer ...
Waa nooca caadada-dhamaadka sare, mashiinkan xajmiga goynta wax-soo-saarka shaqada waa 3000 * 12000 mm, aaladaha ugu weyn warshadaha qalabka mashiinka jirka oo leh hal mar sameynta geedi socodka, xalka xirfadeed ee qalabka mashiinka cabirka weyn kala duwanaanshaha saxda ah oo ay ugu wacan tahay kala-qeybsanaanta kala duwan. ..
Pipe Fiber Laser magaabay, Tuujiye Laser, Mashiinka Goynta Laser Fiber, Mashiinka Goynta Tube Fiber, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Fiber Laser, Shiinaha Fiber Laser Goynta Machine,